Garoonkii magaalada Sirte oo lala wareegay - BBC Somali
Kooxda isugu yeertay Khilaafada Islaamka ee joogta dalka Libya ayaa sheegtay in ay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sirte, iyada oo ay kooxda ku sii fidayaan deegaano kale oo dalkaasi ku yaala.
Warkan ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish, waxaana Khamiistii garoonkaasi isaga baxay maleeshiyo horay u joogtay.
Qeyb badan oo ka mid ah Sirte, oo ah magaalada uu ka soo jeedo hoggaamiyihii hore Muammar Gaddafi, ayaa waxa ay gacanta u gashay kooxda lamag baxday Khilaafada Islaamka.
Warsaxaafadeed ay soo saareen kooxda, ayaa waxa ay ku sheegeen in sidoo kale ay qabsadeen mashruuc webi ah oo bani’aadam uu sameeyay.
Barnaamijkan waraabka ah, oo ah kan ugu weyn dunida ayaa waxa uu u sahlaa in magaalooyinka dalka Libya ay helaan biyo nadiif ah.
Guuto iyo mintidiin kale oo Islaami ah ayaa waxa ay maamulaan caasimada Tripoli, waloow ay yihiin dowlad aanu caalamka aqoonsanayn.
Garoonkaasi diyaarada oo ay hadda la wareegeen ururka Khilaafada Islaamka garabkooda jooga Libya, ayaa waxa uu hore u ahaa xarun diyaaradaha cirka ah, kaddib markii ay ciidamada Nato ay weerareen xilligii uu dhacay dagaalkii lagu afgambiyay Gaddafi sanadkii 2011-kii.